Iinkonzo zoYilo eChandigarh
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Iinkonzo zoYilo Chandigarh
IiTekhnoloji ze-CNT zibonelela ngoqeqesho lweCCNA olugqwesileyo kwi-chandigarh .CCNA UKUHAMBELA NOKUFUNDA IKHALITHI ayisixhobisi nje kuphela kwitekhnoloji esisiseko, kodwa ikwaqinisekisa ukuba samkelwe kwetekhnoloji elandelayo. I-CCNA yakha ukuzithemba kwabafundi ukuba bayakha, bayilawula kwaye bayiphatha njani na ingxaki yenethiwekhi ...
IChandigarh (ibinzana lendawo: [tʃə̃ˈɖiːɡəɽʱ] (mamela) sisixeko kunye nomda womanyano eIndiya osebenza njengedolophu enkulu yelizwe lasePunjab nelaseHaryana. Esi sixeko sahlukile kuba asisiyonxalenye yelinye kula mazwe mabini kodwa silawulwa ngokuthe ngqo nguRhulumente woManyano, olawula yonke imimandla enjalo kweli lizwe. IChandigarh ijikeleze ilizwe lasePunjab emantla, entshona nasempuma, nakwilizwe laseHaryana ukuya empuma. Ithathwa njengenxalenye yendawo enkulu yaseChandigarh okanye iGreater Chandigarh, ebandakanya iChandigarh, kunye nesixeko sasePanchkula (eHaryana) kunye nezixeko zaseKharar, Kurali, Mohali, Zirakpur (ePunjab). Ime kwi-260 km (i-162 yeekhilomitha) emantla eNew Delhi, i-229 km (i-143 miles) kumzantsi mpuma weAmritsar. Le yayisesinye sezixeko zokuqala ezicwangcisiweyo kwi-India ezimeleyo ezimeleyo kwaye yaziwa kumazwe angaphandle ngoyilo lwayo kunye noyilo lweedolophu. Isicwangciso sobuchule sesi sixeko salungiswa ngumyili weSwitzerland-waseFrance uLe Corbusier, notshintsho kwizicwangciso zangaphambili ezenziwe ngumyili wePoland uMaciej Nowicki kunye nomcwangcisi waseMelika uAlbert Mayer. Uninzi lwezakhiwo zikarhulumente kunye nezindlu esixekweni zayilwa liQela leProjekthi yeChandigarh Capital ekhokelwa nguLe Corbusier, Jane Drew kunye noMaxwell Fry. Kwi-2015, inqaku elapapashwa yi-BBC egama linguChandigarh njengenye yezixeko ezimbalwa ezicwangciswe kakuhle kwihlabathi ukuba ziphumelele ngokubhekisele kwindibaniselwano yoyilo, ukukhula kwezenkcubeko kunye nelixesha.I-Capitol Complex yaseChandigarh ibingoJulayi 2016 ibhengezwe yi-UNESCO njengeLifa lehlabathi. kwiseshoni ye-40th yeNkomfa yeLifa leMveli yeHlabathi ebibanjelwe eIstanbul. Ukubhalwa kwe-UNESCO kwakuphantsi "komsebenzi wezoLwakhiwo lweLorbusier igalelo elibalaseleyo kwiNtshukumo yesiXeko". Izakhiwo zeCapitol Complex zibandakanya iPunjab kunye neHaryana Court eNkulu, iPunjab kunye neHaryana Secretariat kunye nePunjab kunye neNdibano yeHaryana kunye nezikhumbuzo ezivulekileyo zesandla, iSikhumbuzo seMartyrs, iGeometric Hill kunye neThala leMthunzi kunye neGadi yeRock esiXhoseni sinenye yezona ziphumo ziphakamileyo zengeniso nganye. elizweni. Esi sixeko kuthiwa yenye yezona zicocekileyo eIndiya ngokubhekisele kuphononongo lukarhulumente welizwe. Indawo yomanyano ikwakhokela uluhlu lwamazwe ase-Indiya kunye nemimandla ngokweSalathiso soPhuculo loLuntu. Kwi-2015, uphando olwenziwe ngabakwaNokia Electronics, balubeka njengeyona dolophu yonwabileyo eIndiya ngaphezulu kwesalathiso sokonwaba. Indawo yedolophu enkulu yaseChandigarh-Mohali-Panchkula ngokudibeneyo yenza isiXeko-isixeko, esinabemi abadityanisiweyo abangaphezu kwe-1,611,770.